Part 1.How ndabere iPad ka iTunes 12 ke Windows
Part 2. otú ndabere iPad ka iTunes 12 On Mac
iPads bụ otu n'ime ndị kasị mma na-ere Apple ngwaahịa na ahịa. Ọ bụrụ na ị ekesịpde gị iPad ruo oge ụfọdụ ugbu a, ị eleghị anya chikọta a ọtụtụ nke faịlụ na ya. Dịcha, ndị faịlụ ndị dị oké mkpa gị na ị na-agaghị achọ ka ida ha bụrụ na gị iPad malfunctions. Ọ bụ ya mere na ọ bụ smart ime mgbe iPad backups ka iTunes 12. iPad ka iTunes 12 backups nwere ike mere ma na Windows na Mac. Tupu ị na-agụ anyị nkuzi na otú ndabere iPad ka iTunes na Windows na Mac, ị kwesịrị ị nwere ndị a di na nwunye nke Atụmatụ n'uche.
1. Tupu ị ndabere gị iPad na iTunes, ị kwesịrị ị na jikọọ gị iPad gị PC ma ọ bụ Mac na iji USB na wee na gị iPad.
2. iTunes kwesịrị imeghe na-akpaghị aka mgbe gị iPad jikọọ. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị, na-emeghe ya aka.
3. iTunes nwere ike na-akpaghị aka ndabere gị iPad oge ọ bụla ị jikọọ na ngwaọrụ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na site nhọrọ.
4. Backups nwere ike ma aka na-akpaghị aka.
Ndabere n'aka idetuo faịlụ site na gị iPad gị Windows kọmputa. Otú a, ị ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị na mgbe na-abịa gafee mberede data ọnwụ. Inwe ndabere bụkwa uru ma ọ bụrụ na ị na-ọhụrụ iPad na chọrọ nyefee ntọala si gị ochie otu na ya.
Ọ bụrụ na nhọrọ na-enyocha, iTunes ga-akpaghị aka ndabere gị iPad oge ọ bụla ị jikọọ ya na kọmputa gị. Ma, ntuziaka ndabere-dịnụ n'oge ọ bụla.
Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ jikọọ gị iPad gị na kọmputa. Mgbe ahụ, na-emeghe iTunes. Na n'elu n'akụkụ aka ekpe nke iTunes window ị ga-ahụ na ngwaọrụ bọtịnụ. N'okpuru ngwaọrụ, ị ga-ahụ Summary taabụ.
Pịa ya, na ihe nile nke ihe ọmụma banyere ngwaọrụ gị ga-depụtara. Ozugbo ị na-eme otú ahụ, n'akụkụ aka nri nke window ị ga-ahụ Back Up menu.
Ugbu a, ebe anyị nwere otutu nhọrọ. Na n'aka ekpe na ị nwere nhọrọ maka akpaka backups. Ị nwere ike ịhọrọ ma ị chọrọ ha ga-azọpụta na iCloud ma ọ bụ na kọmputa gị. Akpaka backups ga ndabere niile nke gị faịlụ ka chọrọ ọnọdụ oge ọ bụla ị Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa.
Ma, ihe anyị na ndị nwere mmasị na, na-emi odude n'akụkụ aka nri. Ndị bụ nhọrọ maka ntuziaka azụ elu.
Ọ bụrụ na ị dị njikere iji aka ndabere ekwentị gị, pịa Back Up Ugbu a. Mgbe ahụ, a ọhụrụ window ga-apụta, na-arịọ gị ma ị chọrọ ndabere gị ngwa ma ọ bụ.
Ọ bụ a smart ihe ndabere gị ngwa kwa. N'agbanyeghị nke gị nhọrọ, mgbe ị pịa ndabere ma ọ bụ na ndabere gị ngwa ọdịnala a ọhụrụ, obere window ga-apụta na elu nke gị na ihuenyo.
Nke a window ga gwa gị na nkwado ndabere na mpaghara usoro bụ na-enwe ọganihu. Usoro a na-eme otu ugboro-acha anụnụ anụnụ mmanya jupụtara n'ime elu kpamkpam.
Tupu inye nkwado aka, ị nwekwara nhọrọ encrypt gị backups. Ọ pụtara na-echebe gị backups na a paswọọdụ, bụrụ na ị na-eche na onye ọzọ nwere ike iri ha. Nke a bụ nnọọ uru ma ọ bụrụ na ị nwere mwute Ama ịchekwa na gị iPad.
Akpaghị aka na aka kwadoo-elu ozi na-agụnye ozi ederede, ndetu, na-akpọ ihe mere eme, na kọntaktị ọkacha mmasị, ụda ntọala, wijetị ntọala, foto na igwefoto Roll ma ọ bụ zọpụta Photos. Ma, ndị ọzọ media faịlụ (songs, vidio, na ụfọdụ foto ihe atụ) na-adịghị kwadoo elu na usoro a. Iji kwado ha, ị ga-akpa mkpa ka mmekọrịta ha na iTunes.
Ichetụ n'echiche ịrụzi gị iPad, na onye na-aga idozi ya na-agwa gị na ha na-aga nwere na-ehichapụ gị niile data. Nke ahụ ga-a egwu ọnwụ, ọ bụghị ya? Iji gbochie nke si na-eme, nanị ndabere nile data gị iPad ka iTunes on Mac. Usoro dị nnọọ mfe, na yiri nnọọ ka akwado na Windows. Eziokwu-gwara, akwado na Mac bụ ọbụna dị mfe. Ka anyị igosi gị otú.
Dị ka mgbe niile, nzọụkwụ mbụ bụ ikwunye gị iPad gị Mac na-agba ọsọ iTunes. Ozugbo ị na-eme otú ahụ, chọta gị ngwaọrụ ke n'aka ekpe nke iTunes window.
Mgbe ahụ, nri-pịa ngwaọrụ gị ma họrọ Back Up.
Ozugbo ị na-eme otú ahụ, niile data gị iPad ga-azọpụta na gị Mac.
Eweghachiri backups si iTunes dị nnọọ mfe. On Mac niile i nwere ime bụ nri-pịa ngwaọrụ gị na nke ị chọrọ iji weghachi ndabere ka na-ahọrọ Weghachi si ndabere.
Na Windows, họrọ weghachi si ndabere, nke bụ na-esote Back Up Ugbu a bọtịnụ, na nkwado ndabere na mpaghara menu.
Dị ka e kwuru n'ihu, ụfọdụ media faịlụ gaghị kwadoo. Ndị faịlụ agụnye songs, videos na ụfọdụ photos. Iji nwere ndị a faịlụ kwadoo, ị ga-mkpa ka mmekọrịta ha. Usoro a dị nnọọ mfe, kwa.
Nke mbụ niile, ị ga-mkpa jikọọ gị iPad gị PC ma ọ bụ Mac na ẹkedori iTunes. Ozugbo iTunes ka ulo oru, ọzọ họrọ gị iPad si Devices ndepụta na n'aka ekpe nke iTunes window.
Ozugbo ị họrọ gị iPad, a ndepụta nhọrọ ga-apụta gafee n'elu nke ihuenyo. Na na ndepụta ị nwere ike họrọ music, fim ma ọ bụ foto.
Ka na-ekwu na ị chọrọ ka mmekọrịta foto gị. Dị tinye a ego akara ọzọ ka mmekọrịta Photos. Ị nwere ike ịhọrọ nchekwa ị chọrọ ka mmekọrịta, ma ọ bụ nanị mmekọrịta niile nchekwa. Ọ bụrụ na gị collection bụ nnukwu, i nwere ike chọrọ nyefee nanị ụfọdụ n'ime nchekwa.
> Resource> iTunes> otú ndabere iPad ka iTunes 12 On Mac na Windows Computers